Yiziphi izinzuzo nobubi be-Heat Shrink Butt Splice Isixhumi?
Amagama abalulekile: isixhumi se-butt splice, isixhumi, i-terminal Butt Splice Isixhumi luhlobo lwe-insulation terminal, eklanyelwe ukushisa ikhebula elinciphayo kanye ne-terminal ngemuva kokuthi ikhebula lixhunywe ekugcineni kwetheminali ukukhulisa ukuvikelwa kokubekwa uphawu kokuphela ukwahlukanisa. Lokhu ...
Izinzuzo zesixhumi sePogo Pin
ngomphathi ku 21-04-17
Isixhumi se-POGO PIN Abantu abaningi abakajwayele lokhu, iPOGO PIN luhlobo lwesicelo kumakhalekhukhwini nakweminye imikhiqizo ye-elekthronikhi kusixhumi sokunemba, isetshenziswa kakhulu kwimishini ye-semiconductor, idlala indima yokuxhuma. Njengenye yezinto ezibalulekile zesixhumi, ...
Indlela yokuxhuma i-RJ45 crystal head wire
Manje inkathi ye-Intanethi, yonke imizi ngokuyisisekelo inekhompyutha, i-RJ45 crystal head kanye nekhebula lenethiwekhi kuyinto ebalulekile yokuxhuma inethiwekhi, ekudlulisweni kwenethiwekhi kunendima engenakuguqulwa. Manje ungayixhuma kanjani i-RJ45 crystal head wire? Okulandelayo, sisebenzisa umbhalo nombhalo ukuchaza ...
Yiziphi izidingo zokuhlolwa kwesixhumi sezimoto?
Uma kukhulunywa ngamazinga wokusebenza kohlelo lokuxhuma ugesi wezimoto, lokho kuthobela izinga elijwayelekile le-USCAR-20, isixhumi sezimoto se-USCAR-20 kumele siphephe futhi sithembeke kuwo wonke umjikelezo wempilo, ukuze unikeze abasebenzisi ukusebenza kokuphepha okuyisisekelo. Ngokuthuthukiswa kwemoto ...
Le yindlela engcono yokusebenzisa i-terminal
I-terminal uhlobo lwesixhumi ukwenza lula ukuxhumana kwabaqhubi. Imvamisa yakhiwa izingxenye zokuvikela, izingxenye ezihamba kahle, izinyawo zokushisela nezinye izingxenye, kanye ne-shrapnel yohlobo lwentwasahlobo yohlobo lwentwasahlobo. Isiginali ukwakhiwa kwenqubo. Kunconywa ukuthi ucabangele ukuyisebenzisa ku ...
Isixhumi se-FPC sizothatha indawo yengxenye yesixhumi ngaphansi kokuthuthuka okulula kwemishini
Ibhodi lesifunda eliphrintiwe eliguquguqukayo, isixhumi seFPC igama lesayensi liyathandwa ukukhuluma ukusebenzisa izinto ezithambile ezenziwe (ngezinto) zingasongwa, zigobeke, imikhiqizo yokuxhuma ye-FPC isetshenziselwa ukuxhuma ebhodini lesifunda (i-PCB) nakwibhodi lesifunda eliguquguqukayo eliguquguqukayo (FPC ), Ukufezeka kwemishini kagesi ...
Isokhethi yamandla kagesi ejwayelekile esetshenziswa kakhulu
Namuhla ngizokhuluma nawe ngamasokhethi e-DC. Kholelwa ngokuqinile ukuthi abantu abaningi akumele baqondwe kakhulu, isokhethi le-dc empilweni yethu yangempela lisetshenziswa kabanzi, futhi kubhekiswa kusokhethi le-dc luhlobo lwezinsizakusebenza zokunikezela ugesi ezinikezelwe ngamakhompiyutha okuqapha isokhethi yamandla, isokhethi le-dc ngetheku lase lateral, le ...
Ukucaciswa okujwayelekile kwesixhumi se-DC samandla kagesi
I-plug ye-adaptha yamandla ka-DC ibizwa nangokuthi yinhloko yeDC, okuyisixhumi se-adaptha yamandla ukuxhuma nemikhiqizo eyinikezayo. Yakhiwe ngokushuna imfoloko DC ikhanda ngokulungisa uhlobo lwemfoloko yensimbi yokuxhumana noma ifakiwe ngqo ekhanda le-DC ngensimbi engenalutho yomzimba wokuxhumana, insul ...
Isishayamthetho esiphezulu saseChina samukela izijobelelo ezichitshiyelwe kuMthetho Oyisisekelo we-HKSAR
Isishayamthetho esiphezulu saseChina ngoLwesibili sivote ngazwilinye ukuthi samukele iSithasiselo I esichitshiyelwe kanye ne-Annex II eMthethweni Oyisisekelo WesiFunda Esiphethe SaseHong Kong (HKSAR). Izithasiselo ezimbili zithinta indlela yokukhethwa kwe-HKSAR Chief Executive kanye nendlela yokwakhiwa kwe-H ...
I-UL-URTK / S Ukuhlaziywa Kwesimiso Sokusebenza Kwetheminali Yamanje
Izimboni, ugesi nezinye izindawo zokuxhunywa kwemishini azikwazi ukuhlukaniswa nezixhumi, amatheminali wesitimela asetshenziswa kakhulu njengezixhumi. Izinhlobo ezahlukahlukene zamatimela wesitimela: i-UK universal voltage terminal, i-UL-URTK terminal yamanje, i-JHY1 plate voltage terminal, UL-USLKG grounding te ...